Toamasina : voasambotry ny polisy ireo jiolahy namono an-dRah-Ckiky | NewsMada
Toamasina : voasambotry ny polisy ireo jiolahy namono an-dRah-Ckiky
Voasambotry ny polisin’ny Fip ao Toamasina, afakomaly antoandro ireo jiolahy roa voarohirohy ho nandray anjara mivantana tamin’ny fandratrana ilay mpanakanto Rah-Ckiky ka niafara tamin’ny fampidirana hopitaly azy…
I Barivelo Romain sy Ravony Marcellin ny anaran’ireto jiolahy roa saron’ny polisin’ny Fip ao Toamasina ireto. Niainga avy amin’ny loharanom-baovao teo am-pelatanan’ny polisy no nahafahana nisambotra ireto jiolahy ireto, araka ny fanazavana voaray. Voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fanaovana herisetra ka namparatra mafy an-dRah-Ckiky ry zalahy ireto. Mbola ao anatin’ny fanadihadiana ny polisy ka aorian’izay ny hamantarana ny marina rehetra momba ity raharaha ity.
Tsiahivina fa ny alahady 1 oktobra 2017 vao maraimbe no nisy nanafika tao an-tranony ity mpanakanto ity. Mbola samy renoky ny torimaso izy sy ny vady aman-janany no niditra tao an-trano ireo olon-dratsy. Tsy nisy resaka fa notsatotsatohin’ireo olon-dratsy ny antsy teo am-pandriana izy. Nahitana dian’antsy maromaro ny vatany. Ny nahavariana tamin’ity fanafihan-jiolahy ity, tsy naka na inona na inona ry zalahy fa nanindrona antsy an-dRah-Ckiky ka lasa avy hatrany izy ireo taorian’izay. Torana tsy nahatsiaro tena izy ka nalefa notsaboina avy hatrany tao amin’ny Hopitalibe Toamasina. Tsy vita tao anefa ny fitsaboana noho ny ratra nahazo azy ka nakarina notsaboina taty an-drenivohitra. Avotra soa aman-tsara izy na teo aza ny feo niely tamin’izany fa namoy ny ainy mihitsy ity mpanakanto fanta-daza eo amin’ny zavakanto ity.